बेरोजगारको नाममा … | निर्मलको नेपाली ब्लग - Nirmals Blog
पाहुना » बेरोजगारको नाममा …	Nov21
बेरोजगारको नाममा …
Posted by शिवराम खतिवडा in पाहुना
अस्तिको कुरा हो । मेरो प्रिन्टरमा मसि सिद्धिएकाले प्रिन्ट गर्न साइबरमा गए । त्यहाँ ‘यहाँ बेरोजगार को फर्म भरिन्छ …. ‘ भनेर लेखेको थियो । तर फर्म भर्ने मान्छे चै मैले देखिन । यो कामको सुरुवात हुनु भनेको राम्रो नै मान्न सकिन्छ । अर्को राम्रो लागेको चै निर्वाचन निकायको विद्युतीय अविलेखिकरण । तर जति राम्रा काम हुन सक्थ्ये त्यति चै भएका छैनन् (भन्ने हाम्लाई लाग्छ )।
सरकारले बेरोजगार जतिको सुची तयार गर्दैछ रे । के सबै नेपालीले कम्प्युटरबाट फर्म भर्ना सक्क्लन त ? मलाई केहि कौतुहलता ले छोयो । ति केहि कुरा यहाँ नोट गर्दै छु ।
अधिकाम्स राजनीति गर्ने हरुनै बेरोजगार छन् । नत्र हो भने देशलाई नै कमजोर पार्ने गरि तलब खाने, कानुनको शासनको धज्जी उडाउने कामहरु किन गर्थ्ये ? (ठुलो मन्त्रि मण्डल, संबिधान सभाको म्याद थप्ने) । यी नेताहरु विकास विज्ञ हुन कि होइनन ? अनि देशलाई साच्चै माया गर्ने कर्मचारी पनि कति होलान र ? शंका लाग्ने ठाउँ धेरै छन् ।
कम नेताले मात्रै काम गर्छन । आफै काम नगर्नेले कतिपय युवामा काम गर्ने संस्कार कसरि भर्लान ? अहिले समाजमा एउटा कित्ता तो मान्छेको छ जसले खराब काम बाट भने पनि पैसा कमाओस भन्ठान्छ ।
कतिपयले त सरकारलाई निजि घर बनाउन चाहेको जस्तो देखिन्छ । कतिपय भने यसलाई एन. जी. ओ. बनाउन चाहन्छन, गरिब को नाम मा गफ गर्ने थलो ।
भनिन्छ आफ्ना कार्यकर्ता लाई मात्रै अवसर दिइन्छ । के साच्यै राम्रो प्रयास थालियाको हो ? कुराले होइन काम ले बुज्न सकिएला ।
धेरै सरकारी कर्मचारीलाई कम्प्युटर चलाउन नै आउदैन जबकी तास खेल्न आउछ । देश आजको समयमा कसरि अघि बढ्ला ?
गरिब मुलुक गरिब हुनुको कारण मध्ये ‘धेरै जसो महिलाले सामान्य घरको काम मात्रै गर्नु/गराउनु र उत्पादन मुलक काम नगर्नु / नगराउनु हो’ भनेर भन्ने गरिन्छ । ति महिलाहरुले फर्म भर्लान त ?
सबै युवा, महिला आदि लाई सिप सिकाउने, व्यवसायिकता सिकाउने प्रस्ट केहि योजना छ त सरकार संग ? विशेष गरि युवाले आफ्नो एक प्रमुख सिप जान्नु राम्रो हुन्छ चाहे खेति होस्, व्यापार होस्, वा कुनै विशेष सिप वा पेशा । दोस्रो अन्य नरम सिप । (नरम सिप: प्रभावकारी संचार सिप, समस्या हल गर्ने सिप, तनाव व्यवस्थापन उपाय आदि । उपयुक्त पाठ्यसामग्रीमा जोडिन हेर्नुस तल सन्दर्व पाठ्यसामग्री) ।
अनि यस्तो काम त तथ्यांक विभागले जनगणना गर्दा पनि गर्नु पर्ने होइन र ? कति मरे वा कति बाचे मात्रै पो गन्ने गरिन्छ कि ? कसरि राम्रोरी गरिखाने भन्ने पनि अध्यन ले समेट्न सके राम्रो हुन्थ्यो होला ।
कर्ण शाक्यका ‘सोच …’ जस्ता किताब पनि युवा लाई मार्ग दर्शक हुन सक्छन ।
तपाईले जीवनमा आफै पनि केहि गर्न सक्नु हुन्छ । नेताका कुरामा मलाई चै कमै विस्वास छ । ‘देश उमो लागोस’ भन्ने पुरानो कामना दोराउदै अहिले लाई यति नै ।
केहि सान्दर्भिक पाठ्यसामग्रीमा जोडिन:
दाताहरुले कसरि खराब संस्कार र परनिर्भर सोच हालिदिय भन्ने जान्न: नन्द आर श्रेष्ठ : विकास का नाम मा: नेपाल को प्रतिविम्व
प्रतिबध्ता हुने हो भने देश कसरि उमो लाग्नसक्छ भन्ने जान्न: सिंगापुर को अनुभव
युवा लाई मद्धत पुराउने नरम सिप: युनिसेफ आदि का : एउटा , दोस्रो , तेस्रो …..
नोट : युवाहरुलाई प्रमुख सिपमा सहायता पुराउने नरम सिप, जसले जीवनमा ठुलो महत्व राख्छन, ‘साथी संग मनका कुरा’ जस्ता रेडियो कार्यक्रम ले पनि सिकाउछन् । यस्ता धेरै सामग्री तपाई इन्टरनेट को संजालमा रहनु भएका महानुभावले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ । सामग्री नेपालीमा पनि उपलब्ध छन् । अपडेटका क्रममा यहाँ मैले पनि थप्ने कोसिस गर्ने छु । तपाई संग ति सामग्री भएमा यहाँ उल्लेख/कम्मेन्ट गर्न सक्नु हुन्छ ।
[image source: merosanosansar.blogspot.com]
Related Posts:लिली, लेस्सी र मेरो बर्थडे "व्हाट डु यु गाइज डु फर फन?" लिलीले कुर्ची अलिकति अगाडी सार्दै भनिन् । "म फुटबल प्लेयर हुँ । प्राय फुटबल खेल्छु ।" लेस्सीले उत्साहित हुदैं उत्तर दियो । पालो…दुखेको देश र नयाँ पुस्तक अहिले हामी धेरै नेपालीहरु ठुलो महाविपतबाट गुज्रिरहेका छौं । कतिले आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, साथीभाइ नै गुमाएका छौं । घर गुमाएका छौं । आफ्नो ओत गुमाएका छौं । दुइ छाक खाने…फ्रील्यान्सर मिटअप, सिड्नी "आजकल इन्डिया, चाइना, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स जस्ता देशहरुमा धेरै आइटी जव आउटसोर्स हुन थालेका छन् जसले गर्दा हाम्रो जागीर धरापमा पर्दै गएको छ । काम पाउन अति नै गाह्रो हुदै गएको…कल्पना वान्तवाको “कायाकल्प” नारी संवेदना माथि लेखिएको उपन्यास कायाकल्पले जिन्दगीका विभिन्न उतार चडाबहरु भोग्दै अघि बढेकी एउटा नारीको मनोविज्ञानलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । धेरै कठिन परिस्थितीहरुको सामना गरेर अघि बढेकी कायाको…के हो वेब सर्भर? [यो लेख नेपालबाट प्रकाशित हुने साइबर संचार पत्रिकाको असारको अंकमा प्रकाशित भएको हो । ] तपाइँ हामी दिनहु अनेकौ वेबसाइटहरु हेर्ने गर्छौ । तपाइँलाइ थाहा छ ति वेबसाइटहरु कसरी तपाइँको कम्प्युटर ब्राउजर सम्म…डा. केसी – मेरो सलाम मेरो हातमा किताब थियो। किताब हातमा हुदैमा र आँखा किताबमा हुदैमा मन किताबमा हुनै पर्छ भन्ने छैन। किताबको चाख घट्दै गएपछि वा किताबको कुरालाई केहि समय दिएपछि वरिपरिको यथार्थ वातावरण रोचक…विनोद चौधरीको आत्मकथा पढेपछि समग्रमा किताब राम्रो छ । एक फरक विषय बोकेको छ । साहित्यिक, राजनैतिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरुका जीवनकथा पढिराखेकाहरुका लागि यो एक फरक स्वादको बनेको छ । विनोद चौधरीको आफ्नै संसार…अष्ट्रेलिया, इन्टर्नसिप र जागीर "तपाई जस्तो मान्छे अष्ट्रेलिया किन आउनु भयो?" - उनले मेरो म्युजिक भिडियो हेर्दै भनिन । म हासें र भने "तपाइँ जुन कुराको लागी यहाँ आउनु भयो ।" "म त सिड्नी…
Tags: युवा, रोजगारी, सिप
I like the way you write! Interesting issues related to youth! Go ahead youth.
धन्यवाद /Thanks सुर्य जी !